विचार / विश्लेषण पूर्व राष्ट्रपतिज्यू ! शिखरमै बस्नुस्, खोँचमा तपाईंलाई सुहाएन Monday,2Jan, 2017 12:55 PM
संविधान आउँदाका बेला राष्ट्रपति निवासमा बसेर षडयन्त्र नगरेको भए मधेस आन्दोलनमा यति धेरै मान्छे मारिने थिएनन्, सत्तामा बस्ने, सर्वोच्च पदमै बसिसकेका न्यायिक पृष्ठभूमिका मान्छेले समाजमा दूरी बढाउँदै हिँडेपछि कसरी हुन्छ ? -कृष्ण पहाडी,नागरिक २०७३ जेठ १७ गते उपर्युक्त हरफहरु दैनिक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रसिद्ध मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडीले लेखको एक लेखबाट उद्धृत गरिएका हुन् । त्यति बेला राष्ट्रपतिमा डा. रामवरण यादव र उप राष्ट्रपतिमा परमानन्द झा हुनुहुन्थ्यो । २०७३ पुस १७ गते महामहिम पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको नागरिक पत्रिकामा एक महत्वपूर्ण अन्तर्वार्ता प्रकाशित छ । उक्त पत्रिकामा प्रकाशित राष्ट्रपतिका अन्तर्वार्ता आधारित भनाइहरु मात्र होइन यसभन्दा अघि पनि उहाँका अभिव्यक्ति र व्यवहारमा देखिएको असंगति केलाउनु यस लेखको उद्धेश्य हो । यस लेखको आरम्भमा उल्लिखित कृष्ण पहाडी लिखित अभिव्यक्ति सत्यसंगत र तथ्यपरक देखिन्छ । किन पनि भने जतिबेला केही मधेसी नामका नेता ९० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधिले लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत रुपमा प्रस्तावित र पारित संविधान विरुद्ध तराइ मधेसका रैथाने र आदिवासी जनतालाई भड्काएर संघर्षमा उत्रिन लाग्दा पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बेलैमा शीतल निवास बोलाएर सार्थक संवाद गर्नुभएन ।
राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र सद्भाव जस्ता विषयमा तर, तथापि, परन्तु आदि घुमाउरो र काइते कुराको कुनै अर्थ छैन । देशलाई प्रेम गर्ने कुरा पनि घुमाएर गर्नुपर्छ ?
उहाँले आन्दोलनकारीहरुलाई फोन गरेर सम्झाएको मात्र प्रचार गरियो । संविधानविद् तत्कालीन सभामुखलाई संविधान विषयक सुझ–समझ दिएजस्तै प्रभावकारी रुपमा मधेसी नेतालाई यादवले सम्झाउनु भएन । बरु शीतल निवास संविधान विरुद्ध दिलोज्यानले उत्तेजना बढाउने काममा गोप्य र रहस्यमय आश्रयस्थल बनेको स्पष्ट भयो । अहिले नागरिकको अन्तर्वार्तामा पनि पूर्व राष्ट्रपतिज्यूका परस्पर बाझिने अन्तर्विरोधी विचार व्यक्त भएका छन् । यादवज्यूले अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै नेपालीभाषी नेताबाट तराई छाड्नै नहुने, तराईका नेताबाट पहाड जोड्नै नहुने दुवै अतिवादी कुरा हुन् ? यसमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको कुरा किन यादवले नगरेको ? उहाँले नेपालीभाषी नेताले राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सद्भाव कायम गर्न खोजेको कुरामा किन समर्थन नगरेको किन उल्टो ती विचारमा संकिर्ण खालको सोच राख्नु भएको हो ? तराई–मधेस छोडेर वा मधेसलाई अलग राष्ट्र बन्न दिने कुरा एउटा सच्चा देशभक्त पार्टी, व्यक्ति र नेतृत्वले सोच्न सक्छ ? राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता र सद्भाव जस्ता विषयमा तर, तथापि, परन्तु आदि घुमाउरो र काइते कुराको कुनै अर्थ छैन । देशलाई प्रेम गर्ने कुरा पनि घुमाएर गर्नुपर्छ ? एउटा राष्ट्रवादीले सत्य कुरा सोभैm गर्दा हुन्छ । अझ पूर्व राष्ट्रपतिज्यूले त मधेस पहाडबाट अलग रहे पनि हुन्छ भन्ने कुरा गरेर घुमाउरो रुपमा नेपाललाई दुई राष्ट्र (अर्थात् पहाड र मधेस राष्ट्र बनाउने)मा परोक्ष रुपमा स्पष्ट दृष्टिकोण अघिसारेको देख्दा अचम्म लागेको छ । कृष्ण पहाडीले नागरिक पत्रिकाको २०७३ जेठ १७ गते प्रकाशित लेखमा ठूला दलबाट शक्तिशाली पदमा पुगिसकेका मान्छेलाई नै भड्काएर देश विरुद्ध प्रयोग गर्ने खतरा रहेको बताएका थिए । के अहिले यस्तै हुन लागेको त होइन ? प्रक्रियामा विश्वास गर्ने भएकाले असन्तुष्टिलाई थाती राखेर पद्धतिलाई स्वीकार गरेको बताउने यादवले मधेसी दललाई किन राम्ररी सम्झाउनु भएन, बरु आफ्नै असन्तुष्टि पो छर्न थाल्नु भयो ? दोस्रो संविधानसभामा ‘पहिलो जस्तो व्यापक छलफल बिना संविधान जारी भएको’मा यादवले गम्भीर गुनासो अन्तर्वार्तामा गर्नु भएको छ ।